March 2016 – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
March 24, 2016 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Guyyaan kun sooma guuddaa Dilbata isa arfaffaati . Moggaafamni guyyaa kanaas Matsaaguu jedhama . Moggaafamni kun kan itti moggaafamuu danda’e Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa kanatti dhukkubsattoota fayyisuu Isaa, raajii goochuu Isaa, warra dhibee addaddaan qabamnii turan hundaaf fayyina kennuusafi qulqulleesuusaa; waluumaa gala fayyisaa ta’u Isaa ibsuudhaaf.
Keessumaayyuu guyyaa kanatti seenaan fayyinaa yaadatamu ni jira: dhukkubsatan tokko bakka itti xabala cuubbatani Beeta Saayidaa jedhamte waamamtuutti ciise ture. Maqaa Matsaaguu jedhamuun beekama. Kanaafuu Matsaaguu jeechuun dhukkubsataa jechuudha. Dhukkubsataan kuni waggoota 38 tiif dhukkuba cimaatiin hubamee siree irratti rakkachaa kan ture yoggu ta’u, guyyaa kana Gooftaan sagaleesaatiin qofa isa fayyise; “ka’itii sireekee baattadhuu deemi” jechuunis guboo dhukkubbii tokko malee bilisa isa baaseera.
Mata-dureen faaruu Q/Yaarediin ayyaana guyyaa kanaaf kennames “አምላኩሰ ለአዳም” (Uumaa Addaam) isa jedhudha.
Sirna Qiddaasee guyyaa Matsaaguu keessatti kutaaleen Kitaaba Qulqulluu keessaa dubbifaman warren armaan gadii jiranidha:
v Galaatiyaa 5፡1
v Ya’iiqoob 5:14
v Hojii Ergamoota 3:1-12
v Misbaakiin guyyicha: Farsaa Daawit 40 (41):3-4
እግዚአብሔር ይረድኦ ዉስተ ዐራተ ሕማሙ (Waaqayyo dhukkubsataa siree isaarratti ni gargaara)
v Wangeelli Qulqulluu guyyicha duubifamu፡ Yohaanis 5:1-25
v Gaafa guyyaa jimaataa kaballaatiin fuula Isaa kan rukutu isa waan ta’eefi;
v Warrootni Ayhuudi yeroo isa himatan ragaa sobaa ta’e kan gooftaa irratti raagu isa waan ta’efidha.
Namootni “fayyina kan siif kenne irratti badiinsa kana maaliif rawwatta?” jedhanii yeroo isa gaafatani “yoom na fayyisi isan jedhe, ofumasaa na fayyise malee?” akka hin jenneef sababa dhabsiisuuf jecha “fayyuu ni barbaaddaa?” jechuudhaan gaaffii dhiyeesseefi. Har’as Waaqayyo Waaqa bilisaa waan ta’ef, “abiddaafi bishaan fuuldura keetti qopheesseera; harkakee gara barbaaddetti ergi” jechuudhaan mirga hin daangeffamne nuuf kenneera. Bilisaan akka Isa Waaqeffannu nu taasisee waan jiruuf badiinsa keenyaaf ,goocha keenyaaf sababa dhiyeeffanu gonkumaa hinqabnu. Kanaafuu, badiinsa irraa ooluuf jecha cubbuu iraa fagaannee Mootuumaa Isaa akka dhaallu eeyyama Isaa nuuf haa ta’u; akkasumas araarsummaan durbee Maariyaamii nuu waliin haa ta’u-ameen!
Madda: Kitaaba Andimtaa (Hiika Abbootii) kan Yoh.5 fi Kitaaba Gitsawwee
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2016-03-24 15:43:342018-10-26 09:21:11Matsaaguu
March 17, 2016 /in Barumsa Amantaa /by EOTC Afaan Oromo
Torbeewwan sooma guddaa yookiin sooma Gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos keessaa inni lammataa Qulqulleettii (Qiddist )jedhama. Sababiin kana jedhameefis “ዛቲ ይእቲቅድስትዕለት ” guyyaan kun ebbifamtuudha. Kanan itti boqodhe sanbata qulqulleettii dha. Ani qulqulluu akkuman ta’e isinis qulqulloota ta’aa (Lew 19:2-3) jechuudhaan Waaqayyo abbaan guyyaa sanbataa ni qulqulleesse,ni kabajes. Jechaa qulqullummaa Sanbataafi namnis qulqullummaan jiraachuu akka qabu kaasaa waan faarfatuuf torbeen kun Qulqulleettii jedhameera. Moggaasichis Sanbatni guyyaa boqonnaa akka taatu bara Ooritiis bara Wangeelaas Waaqayyo guyyaa eebbise, guyyaa kabaje ta’uu nutti hima. Gara biraanis Waaqayyo qulqulluu akkuma ta’e namni harka Waaqayyon uumames qulqulluu ta’uu akka qabu nutti hima. (Uum 2:3, Bahuu 20:8-11; 1Pheex 1:15-16).
Caqasootni guyyaa Sanbataa kana Qiddaaseerratti dubbifaman kanneen armaan gadii jirandha:
1Tese. 4:1-12 ((Waaqayyo cubbuudhaaf osoo hin taane qulqullummaaf nu waameerati….))
1Pheex. 1:13-25 ((…Ani Qulqulluu waanan ta’eef akkasuma isinis Qulqulloota ta’aa jedhamee waan barreeffameef kan isin waame qulqulluu akkuma ta’e isinis immoo jireenya keessan hunda keessatti Qulqullooota ta’aa)).
H.Er. 10:17-30 ((Pheexiroosis akkana isaaniin jedhe- “namni Yihuudi orma waliin makamuu akka hindandeenye ni beektu. Anaaf garuu namni kamiyyuu xura’aa akka hintaaneefi eenyuunuu tuffachuu akkan hinqabne Waaqni na agarsiiseera. Kanaafuu otuu homaallee hin shakkiin gara keessan nan dhufe”))
Faaruu 95 (96):5 (Misbaakii)
እግዚአብሔርሰ ሰማያተ ገብረ
አሚን ወሠናይት ቅድሜሁ
Hiika:“Waaqayyo garuu samiiwwan hojjete
Galataafi miidhaginni fuuldura Isaati
Qulqullummaafi ulfinni isaa Mana Qulqullummaasaa keessadha”.
Maat 6:16-25 “yeroo soomtanitti akka warra of agarsiisanii hin coologiinaa. Akka soomtotaa mul’achuuf fuula isaanii ni balleessu waan ta’eef . Dhuguman isiniin jedha gatii isaanii argataniiru. Ati garuu yeroo soomtutti abbaa kee isa hin mul’anneef malee akka soomtotaa namatti argamuuf hin carraaqiin. Mataa kees dibadhu; fuula kees dhiqadhu. Abbaan kee inni dhoksaadhaan si ilaalu ifaan siif kanfala. Bakka ilbiisni adda addaa balleessanifi hattootni hatuu danda’an lafa kanaratti qabeenya ol-hin keeyyatiinaa…..samiirratti walitti qabadhaa malee. Bakka qabeenyi kee jiru lapheen kees ni jirati. Ifni qaamaa ija dha. Egaa ijji kee nagaa yoo ta’e qaamni kee hundi ifa ni ta’a. Ijji kee dhukkubsataa taanaan garuu qaamni kee hunduu kan dukkanaa’e ni ta’a. Egaa ifni si keessa jiru dukkanoofnaan dukkanni kaan akkam haa cimuree? Gooftaa lamaaf bitamuu kan danda’u tokkollee hin jiru-tokkoosaa ni jaalata ykn isa tokko ni jibba. Waaqayyoofi qarshiif bitamuu hindandeessan. Kanaafuu waa’ee lubbuu keessanii, waan nyaattaniifi waan dhugdaniif yookiin qaama keessanitti waanta uffattaniif hin yaadda’iinaa isiniin jedha”
Waaqayyo kan nu waame qulqullummaan jiraannee mana isaa akka dhaalluufidha. Mana isaa dhaaluuf immoo hojii qulqullummaaf kan nu gahan ajajasaafi abboommii isaa eeguun nurraa eegama.
Namootni tokko tokko yeroo soomanitti namarraa galata barbaacha (inni cimaadha jedhamuuf) fuula isaanii daalacheessuun sirrii miti.
Torbee soomaa kana keessa waa’ee qulqullummaa Waaqayyoo, qulqullummaa Sanbataa, hojii qulqullummaaf nama geessisan yaadachaa hiyyeessas gargaaraa soomuu qabna.
Torbee dhufu barreeffama torbee Mikuraabaan wal-agarra. Hangasitti araarri Waaqayyoo hunda keenya waliin haa ta’u. Ameen.
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2016-03-17 10:32:202018-10-26 09:21:11Qulqulleettii (Qiddist)
March 11, 2016 /in Barumsa Amantaa /by EOTC Afaan Oromo
Barumsa duuka bu’oota waaqayyoo irratti kan hundoofte manni Amantaa Kiristaanaa Ortoodoksii Itiyoophiyaa tokko waan taateef sirnaafi seera soomaa ni qabdi. Sooma manni Amantaa keenya nutti himtes gosaan torbadha.Isaan kana hunda keessaas kan waqtii ammaa kana ilaallatu Sooma Guddaa isa jedhamu ni ilaalla.
Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos nuuf fakkeenya ta’uuf nu barsiisuuf kan soomedha.Soomaguddaa kanattis diinni keenya jalqabaa seexanni kan itti moo’amedha.Nutis kana hubachuun karaa adda addaa qormaata nutti dhufu ofirraa fageessuuf eebba guddaa sooma kanarraa akka argannuuf ni soomna.
Mat 6:16 irratti kadhadhaa,soomaa nuun jedha.Ajajasaas eeguuf ni soomna. Soomni guddaan gooftaan soome kunis maqaa adda addaa qaba.
1ffaa.Sooma Guddaa:- Waaqa waaqotaa kan ta’e Gooftaa Iyyesuus Kiristoosiin kan hundaa’e waan ta’eef Sooma Guddaa jedhameera.Soomakana kan soomnu guyyoota 55’f dha.Sooma jiran keessaas dheerina guyyootaan isa guddaa waan ta’eef Sooma Guddaa jedhama. Gooftaan keenya Iyyessuus Gadaama Qoroonxoos keessatti soomaa osoo jiruu seexanni qorumsa gurguddoo sadii isaaf dhiyeesse.Qorumsi kunis sassatuu, of-tuulummaafi jaalala Qarshii dha.Qormaata kanneen sadaniinis seexanni yeroo baay’ee waan nama qoruuf Waaqayyo qorumsa sadan kana moo’icha taasise. Kanaafis soomni kun sooma guddaa jedhama.
2ffaa.Sooma Hudaadee:- Bara durii lafti bali’ina qabuufi lammiin hundi gamtaadhaan misoomsu uummata biratti “hudaadee” jedhamuun beekama ture. Soomiin kunis lammii amantii Kiristaanaa kan ta’e hundi, xinnaa-guddaa, dhiira-dubartii otuu hin jedhiin Kiristoosiin fakkeenya godhachuun waan soomaniif (sooma hundaa ta’uu ibsuuf) “hudaadee” jedhameeera.
3ffaa.Sooma Beenyaa:- Addaamiifi Hewwaan Jannataa kan arii’ataman ,gabrummaa si’ooliif kan gahan sababa nyaataani.Sababa nyaataan ilma namaa du’eef Gooftaan beenyaa kanfale.Beela afuuraa beela’aa isaaniif beenyaa kanfaleef.Kanaafis Sooma Beenyaa jedhama.
4ffaa.Sooma Moo’insaa:- Qormaata seexanaa gurguddoo sadan- sassatuu, of-tuulummaaf Qarshii jaalachuu- Gooftaan soomarra osoo jiruu mo’ichaan waan bira darbeef nutis qormaata dhufu hunda soomaan akka bira dabarruuf soomni kun Sooma Mo’insaa jedhama.
5ffaa.Sooma Ce’umsaa:- Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos seera Ooriitii irraa gara seera Wangeelaatti nu ceesisuus sooma soome waan ta’eef soomni kun Sooma Ce’umsaa ni jedhama.
6ffaa.Sooma Barumsaa:-Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos kan soome nuun nu barsiisuufidha.Inni soomuu kan qabu ta’ee osoo hin taane nuuyiif fakkeenya ta’uufidha.Kanaafuu soomni kun Sooma Barumsaa jedhama.
7ffaa.Sooma Eebba Jireenya Gadaamaa:- Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos magaalafi namarraa fagaatee soomuun jireenya gadaamaa kan akka qulquluu Yohaannis cuuphaafi raajiichi Eeliyaas jiraatan eebbiseera. Kana ilaalchisuun warren sana booda jiran hundaaf jireenya Gadaamii waan eebbiseef soomni kun Sooma Eebba Jireenya Gadaamaa jedhama.
8ffaa.Sooma Qohaa’inaa:- Uummatni Isiraa’eel hoolaa faasikaa nyaachuu isaanii dura qophii ni taasisu ture. Nutis du’aa ka’umsa Gooftaa kabajuuf fooniifi dhiiga Gooftaatti dhiyaachuun keenya dura soomaafi kadhaan qophii kan goonu waan ta’eef soomni kun Sooma Qophaa’inaa jedhama.
Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos Maaliif Guyyaa 40 Soomee?
Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos hundeessaa seeraa waan ta’eef hojii Isaa soomaan jalqabe.Sooma jalqaba hojii hundaa taasise.
Nyaatni foonii hundi cubbuu hojjechuuf hundee akkuma ta’e, soomnis nyaata lubbuu isa bara baraan nama jiraachisuuf hundeedha.
Raajonni gurguddoon darban guyyaa afurtama,afurtama soomani. Gooftaan keenyi Iyyesuus Kiristoosis “ani kanan dhufe seera raajotaa hanbisuuf miti; raawwachiifidha malee” akkuma jedhe (Matt.5:17) guyyaa afurtamaafi halkan afurtama soome. Yoo guyyaa afurtama caalchise Ayihuud seera raajotaa hin eegne jedhanii seera wangeelaa fudhachuurraaa duubatti akka hindeebineef; yoo sanaa gadi soomes fudhachuurraa duubatti waan deebi’aniif akkuma raajotaa halkan afurtamaafi guyyaa afurtama soome.
Museen halkan afurtamaafi guyyaa afurtama soomee seera ooriitii akkuma dhugoomse Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos halkan afurtamaa fi guyyaa afurtama soomuun seera wangeelaa hundeesseera.
Museen waggaa afurtama biyya Miidiyaam erga jiraatee booda saboota Isiraa’eel bitttaa Misiraa jalaa baaseera (Ba’uu. 3). Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoosis halkan afurtamaafi guyyaa afurtama soomuun lubbuuwwan si’ool keessa jiran baaseera.
Isiraa’eelonni deemsa isaanii waggoota afurtama booda biyya isaanii Iyyerusaalem galaniiru; Gooftaanis nuyiin guyyaa afurtama yoo soomtan mootummaa Waaqayyoo ni dhaaltu jechuuf guyyaaa afurtamaafi halkan afurtama soomee nu agarsiise.
Hizqi’eel cinaacha isaa isa bitaan guyyoota afurtama ciisuun lubbuu du’an 600 kaaseera (Hiz.4:4-6). Gooftaanis guyyaaa afurtama yoo soomtan du’aa ka’umsa kabajaa ni argattu jechuuf guyyaa afurtamaa fi halkan afurtama some.
Nuti Maaliif Guyyoota 50 Soomnaree?
Soomni Guddaan (Soomni Gooftaa) kun torbeewwan saddet yookiin guyyaa 55 qaba. Guyyoota kana keessas Sanbata torbaafi Dilbata saddeetitu jira.Guyyootni kunis (Sanbatafi Dilbatni) nyaata gosawwan beeladaa irraa malee sa’aatii hedduu turuun kan soomnu miti.
Karaa biraatiin immoo guyyaa 55 jiran keessaa torbeen lama sooma Hirqaaliifi torban Gidiraa Kiristoos (Himamat) dha.Torbeewwan kun lamaan kan gooftaan guyyaa afurtama soome osoo hin taane torban inni gidiraa itti argeefi mootichi Hirqaal sooma labsiin soomsise dha.
Torbeen inni jalqabaa soooma Hirqaal jedhama. Inni dhumaa immooo torbee Gidiraa Gooftaa jedhama.
Hirqaal bara 614 Dh.K.B mootii biyya Beezaantaayiin ture. Torbeen kun maqaa isaatiin sababni inni itti waamame bara sana Faarsoonni Iyyerusaalemiin weeraranii muuziyeemii biyya israa’eel keessa kan jiru fannoo Gooftaas booji’anii fudhatanii ture. Lubootas ajjeesanii deeman magaala ishees ni guban. Kana booda kuma jaatama kan ta’an ajjeesaniifi madeessanii kuma sadii kan ta’an booji’anii gara Faaris Baabiloonitti fudhatan.Yeroo kanatti lola jalaafi miidhaa akkanaa jalaa warri miliqanii holqaafi bosonaalee adda addaa keessa warri turan uummanni Iyyerusaaalem bara waggaa 14 booda bara 628 Dh. K. B. iyya isaaniifi gidiraa isaanirra gahe Waaqa isaaniifi kiristaanicha mootii Roomaatti (Hirqaalitti)dhageessisan. Loliitu waan booji’amne hunda nuuf deebisi isaatiin jedhan. Innis deebisee “duuka bu’oonni lubbuu kan baase yookiin ajjeese umurii isaa guutuu haa soomu jedhanii barsiiisaniiru. Kanaafuu sooma umurii guutuu kana sodaadheen malee osoon siniif lole natti tola jedhe.Isaanisdeebisaniis namni tokko kan jiraatu yoo baay’ate waggaa 70 ykn 80; nuti hundi keenya walii hirree sii soomna kanaafuu loltee bilisa nu baasi jedhani. Innis hundi uummataa torbee tokko tokko akka isaaf sooman erga ajajee booda gara Faarsitti duulee fannooo Gooftaa deebisiisee gara Iyyerusaalemitti deebi’eera. Kana booda isaafis fakkeenya akka ta’uuf sooma inni labsiin soomsise kana abbootiin sooma guddaa kana faana akka soomamu taasisan.Soomni isaas Soooma Hirqaal jedhama.Seenaan isaas seenaa jaalalli fannoo kan itti mul’atedha. Torban Gidiraa immoo yeroo biraa ni ilaalla.Kanas ta’e sana torbeen lamaan kun fuulduraafi duubaan akka hundee (ejjannoo) fi xumuraatti waan sooma gooftaa faana jiraniif sooma guddaa faana akka lakkaa’aman taasifameera.
Moggaafama Torbeen (Dilbata) Sooma Guddaa Keessaa
Mana amantaa keenyaaf faaruufi yeedaloo wal-simsiisuun cimsee kan barsiise qulqulluu Yaareed kitaaba isaa “Tsoome Diggu’aa” jedhamu keessatti torbeewwan sooma guddaa hundaaf faaruu faarfatamuu qabaniif maqaa torbeewwan kanatti kenneera.Manni Amantaa Ortoodoksii aadaafi duudhaa mataa ishee qabaachuun ishee ni beekama.Sirnabal’aa qabaachuu isheetiinis kan kabajju guyyaa Sanbataafi ayyaanotaa,sooma soomtu,kadhaa kadhattu,maahileeta dhaabbattu hundi seeraafi sirna mataa isaa ni qaba. Ka’umsa tokko malee sanbata kabajju, sooma soomtu,kadhaa kadhattu hinqabdu. Haala kanaan sooma hudaadee kana kan soome gooftaa keenya fayyisaa keenyaa Iyyesuus Kiristoos waan ta’eef biyya lafaarra deddeebi’ee barsiisaa yeroo turetti gocha inni raawwate yaadachaa sanbatoota tokkoo tokkoo isaaniitti maqaa kennuun akka maqaaa sanaattis seenaasaa kaasuun Manni Amantaa keenyaa gooftaa ni galateeffatti,ni faarfatti,ni kadhatti.
Haalakanaan turban inni:
5ffa– Debre Zeyit;
8ffa– Hoosaa’inaa jedhama.
Egaa warraa armaan olitti ilaalle kana hunda torbee torbeen ni ilaalla. Torbeen inni 9ffaa Ayyaana Du’aa Ka’umsaa ta’uunsaas dagatamuu hinqabu.
Sanbatni guyyaa sooma jalqabaa itti simannu kun Zeweredee yookiin Museenii jedhama. Sababa inni itti Zeweredee jedhameef jala bultii guyyaa kanaatti luboonni bataskaana keessatti kan faarfatan jalqaba sooma diggu’aa kan ta’e ‘ዘወረደ እምላዕሉ አይሁድ ሰቀሉ’ jecha jedhu waan ta’eef sanbata kana qulqulluu Yaareed Zeweredee jedhee moggaase.Hiikniisaas ‘’isa samiirraa bu’e Ayihuud fannisani ‘’kanjedhu yommuu ta’u waa’ee gooftaa keenyaa Iyyesuus Kiristoos samiirraa gadi bu’ee fannisamuu isaa kan ibsu dha.(Yoh 1:9-11, yoh 3:13-21)
Dabalataanis torbeen kun Abbootiin Seenaa Musee kaasaa kan seenaa Gooftaa faana wal-simsiisuudhaan waan faarsaniif Museenii jedhameera.
Caqasoonni guyyaa Wiixataa gaafa jalqaba soomaa dubbifaman keessaa “raajonni guyyaa afurtama afurtama soomanii erga darbanii booda raawwataa seera Museefi raawwataa raajii raajotaa kan ta’e Gooftaan Iyyesuus Kiristoos akka isaanii guyyaa afurtamaafi halkan afurtama kan soome ta’uu isaa kan yaadachiisu dha.(Bahuu 24:18; 1Moot. 19:8; Maat 4:1-4)
Gara biraanis “sagalee Waaqayyoo warra isinitti himan dursitoota keessan yaadadhaa; firii jireenya isaanii ilaalaa amantii keessaniin fakkaadhaa. Iyyesuus Kiristoos kaleessas, har’as barabaraan sanuma.Barumsa keessummaa adda addaan hin fudhatamiinaa. Lapheenkeessan kennaa Waaqayyoon yoo cime gaariidha malee nyaataan miti….garuu hojii gaarii hojjechuu warra kaaniifis qooduu hin dagatiinaa aarsan akka akkanaa Waaqayyoon ni gammachiisa’’ jedha (Ibr.13:7-16). Kanaaf hangafoota keenya warren karaa Waaqayyo nutti himan, waa’ee soomaas warra nutti agarsiisan warren akka Musee yaadachuuf deemsa isaanii hordofuun nurra jira.
Egaa walumaa galatti torbeen jalqaba soomaa kun torbee samiirraa gadi bu’uun Kiristoos itti labsamu ta’uu isaa hubachuu qabna.Kan torbee itti aanu kanaan booda wal-duraa-duubaan hordofaa.
Nagaan Waaqayyoo hunda keenya faana haa turu; ameen!
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2016-03-11 07:42:372018-10-26 09:21:11Sooma
March 10, 2016 /in Barumsa Amantaa /by EOTC Afaan Oromo
6ffaa.Sooma Barumsaa:- Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos kan soome nuun nu barsiisuufidha.Inni soomuu kan qabu ta’ee osoo hin taane nuuyiif fakkeenya ta’uufidha.Kanaafuu soomni kun Sooma Barumsaa jedhama.
• 1ffa- “Zeweredee”;
• 2ffa- Qiddist;
• 3ffa- Mikuraab;
• 4ffa- Mitsaaguu;
• 5ffa- Debre Zeyit;
• 6ffa- Gebriheer;
• 7ffa- Niqoodimoos;
• 8ffa- Hoosaa’inaa jedhama.
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2016-03-10 10:15:402018-10-26 09:21:12Sooma Gudda
March 3, 2016 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Yeroo ammaa Angafoota Phaaphaasii biyya Lallaba Arsii ta’uudhaan Waggaa 30 ol tajaajilaa osoo jiranii Guraandhala 21 B.A. 2008 adunyaa kana irraa du’aan boqatanii jiru. Sirni awwaala isaanii guyyaa kamisaa guurandhala 24/2008 biyya lallaba isaanii gadaami isaanuumti huundeessanii tajaajila Afuuraa isa ol’aanaa kan itti keennani Dabre Qidus Dabra Ma’aazaa Gadaamii Abbaa keenya Abuuna Takla Haymaanootitti ni raawatama.
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2016-03-03 06:19:362018-10-26 09:21:12Eebbifamoo Abbaan keenya Naatna’eel Addunyaa kana irraa du’aan booqatani